Sakafo astringent | Sakafo Nutri
PaÃ¼ Heidemeyer | | sakafo, fanampin-tsakafo
El vatana mety tsy salama tsara isan'andro, mety hisy fiatraikany amin'ny vatana a sakafo ratsy, amin'ny fananana fiarovana ambany na aretina viral.
Amin'ity tranga ity dia te hiresaka momba izany izahay ny fomba hikarakarana ny zavamiaina Rehefa voan'ny aretim-pivalanana ianao, ny fomba tsara indrindra dia ny fihazonana sakafo astringent izay manampy antsika hitazona vavony matanjaka.
Ny fivalanana dia mety hiseho nefa tsy tadiavintsika izany, mijanona tsy mandeha tsara ny tsinay noho ny aretina, na tsy fahazakana sakafo sasany. Tena tsy mahazo aina ny manana aretim-pivalanana na manana vavony ratsy, noho izany, holazainay aminao eto ambany ny fomba fihinanana astringent izay tokony harahinao hanatsarana sy hialana amin'ny fivalanana.
1 Sakafo astringent
1.1 Fa maninona isika no mivalana?
2 Mba handray an-tsaina ao amin'ny astringent sakafo
3 Sakafo mba hanatanterahana sakafo astringent
3.1 Voasarimakirana vita an-trano
3.4 Mofo fotsy misy quince
3.5 Ny henan'akoho no safidy voalohany
3.6 Vary fotsy
3.7 Ovy masaka
3.8 Mihinana trondro fotsy
Una sakafo astringent Mety ho fanampiana be dia be ho antsika izany rehefa tsy misy tsinay tsara, rehefa mivalana, marary vavony na vavony marefo.
Manaraka izany dia holazainay aminao inona ireo sakafo ireo izay tsy maintsy lanintsika ka mihatsara haingana ny vatantsika.
Ny sakafo astringent tTanjona ny hanasitrana ny rafi-pandevonan-kanina rehefa misy marary amin'ny vavony, manaikitra tsinay na mivalana mafy. Ny drafi-pisakafoanana dia tsy maintsy ovaina mba ho sitrana tanteraka ny vatana, tsy maintsy ampidirina andian-tsakafo izay manampy amin'ny famongorana ny fivalanana.
Fa maninona isika no mivalana?
Alohan'ny hanehoantsika hevitra momba izay sakafo tokony hohanintsika ary iza amin'ireo no tokony hialantsika dia tsy maintsy fantarintsika ny fomba na ny antony mahatonga antsika mivalana.
Niaritra izany isika rehetra indisposition, ary mety haharitra iray andro ka hatramin'ny herinandro, miankina amin'ny hamafin'ilay viriosy na izay nahatonga azy.
Parasites tsinay izay manova ny fandevonan-kanina.
samy hafa aretina, ho an'ny fihinanana sakafo amin'ny toe-javatra ratsy na fisotro rano tsy azo sotroina.
bakteria toy ny e-coli na salmonella.
Manana sindrona tsinay mahasosotra.
Nandalo a fandidiana ao amin'ny tsinay kely.
Aretina toa ny Aretin'i Crohn.
Aza mandefitra lactose.
Manaova allergy amin'ny glotena.
Manaova fanovana ao amin'ny tiroida.
Mba handray an-tsaina ao amin'ny astringent sakafo
Tsy maintsy jerentsika ny andian-dahatsoratra rehefa manatanteraka sakafo astringent isika hanatanterahana azy amin'ny fomba mahomby. Satria raha tsy manaraka dingana maromaro isika dia mety tsy ho sitrana amin'ny fotoana tadiavintsika.
Aza mihinana be dia be ao amin'ny sakafo.
Ny tsara indrindra dia mihinana sakafo dimy na enina isan'andro amin'ny vola kely.
Tokony hisotro ranon-javatra be dia be ianao hisorohana fahampian-drano
Halaviro ny sakafo rehetra misy tavy.
Aza mihinana sakafo na mangatsiaka be na mafana be, afaka nanova ny tsinay.
Tsy maintsy miovaova ny sakafo.
Aza mihinana legume na sakafo miteraka entona.
Sakafo mba hanatanterahana sakafo astringent
Voasarimakirana vita an-trano
Rehefa miditra isika ny dingana voalohany ny fivalanana, mila hydrate betsaka isika ary hialana amin'ny sakafo matanjaka satria tsy mahazaka azy ny vatana. Ny tsara indrindra dia ny fanomanana voasarimakirana vita an-trano, miaraka amin'ny ranon'ny voasarimakirana telo mifangaro ao anaty rano iray litatra. Manampia siramamy sotro kely, sira kely, ary soda.
Ity zava-pisotro ity dia hiasa a zava-pisotro isotonic, dia hanome mineraly sy otrikaina ilain'ny vatana.
Ny dite herbal dia afaka mandamina ny vavony ary ataovy izay hahatsapantsika tsara. Ny filamatra dia ny mihinana chamomile na fampidirana mint. Ireo zava-pisotro ireo dia manamaivana ny fanaintainana mifandraika amin'ny fahasosoran'ny vavony na ny fivontosan'ny tsinay, ho fanampin'izay, dia manampy ny fivalanana mahazo fitoviana lehibe kokoa.
Probiotika dia tena salama hatrizay dia bakteria mahasoa ho an'ny làlam-pandevonan-kanina, manamafy ny vavony izy ireo ary afaka miady amin'ny bakteria misy poizina hafa. Izy ireo koa dia manampy amin'ny famenoana ny flora, noho izany, azonao atao ny mihinana ronono kefir, rano kefir na yaourt mampanan-karena probiotika na vokatra vita amin'ny ronono.
Mofo fotsy misy quince
Azonao atao ny mihinana paty quince amin'ny misasakalina na amin'ny tolakandro mba hihinanana sakafo kely. Raha ny tokony ho izy dia tokony hahazo mofo karazana biscote ianao izay namboarina avy lafarinina varimbazaha fotsy, tsy mitambatra mihitsy.
Afaka mamorona anao manokana ianao Quince na mividy azy mivantana any amin'ny faritra mangatsiaka ao amin'ny supermarket.
Ny henan'akoho no safidy voalohany
Mihinana akoho amam-borona mahia, toy ny akoho. Hena manan-karena amin'ny proteinina izay hanampy antsika handamina ny vavony ary hisorohana ny fivalanana tsy haharitra andro maro.
Toma tratra akoho na namboarina tamin'ny voasarimakirana kely. Izany dia hampitombo ny toetra mampiavaka ny sakafo roa.
Angamba ny sakafo be mporisika indrindra rehefa mivalana isika, ny vary fotsy dia gliosida iray izay tsy maintsy ampidirintsika rehefa manomboka mandefitra amin'ny sakafo matanjaka isika. Vitanao ve rano vary ao an-trano, manisy tsorakazo kanelina kely amin'ny tsiro.
Ny ovy dia afaka manampy antsika hihinana sakafo astringent, mila fantarina fotsiny ny fomba fahandro ovy mba tsy hisy fiantraikany amintsika izany na hampahatezitra ny tsinay. Ny filamatra dia ny fanaovana a ovy nopotsehina ovy mba tsy ho sosotra ny vavony ary afaka manana sakafo kalitao.
Mihinana trondro fotsy
Sorohy ny trondro misy menaka, izay na dia mahasoa tokoa aza, dia mety hanakivy ny vavonintsika ny tavy ary hitohy ny fivalanana. Ny filamatra dia ny mihinana cod na hake, trondro fotsy roa izay hitantsika mora foana. Azonao atao koa ny miaraka amin'ireo trondro ireo miaraka amin'ny ovy masaka na puree an'ny karaoty.
Raha vantany vao fantatrao hoe iza no sakafo tsara indrindra hanaovana sakafo astringent, dia holazainay aminao hoe iza amin'ireo no tokony hialanao mba tsy hihavitsy ny vavony ary afaka manana fiainana tsara kokoa ianao.
Legioma be fibre.
Tongolo, tongolo lay, na sakamalao.
Ronono matavy be.
Zava-pisotro misy alikaola.
Avelao aretim-pivalanana Tena tsy mahazo aina, mamela antsika malemy ary mety hiteraka fahasimban'ny vavonyNoho izany, raha mijaly amin'ny fivalanana mihoatra ny herinandro ianao dia tsara ny manatona dokotera fianakavianao mba hahafahany manoro hevitra anao amin'ny sakafo na fitsaboana marina hanasitranana ity fanovana ao amin'ny vavony ity.
Mandritra izany fotoana izany dia tadidio ao an-tsaina izany sakafo astringent amin'ny manaraka dia mivalana na marary vavony ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Sakafo astringent